Herrega Qusannaa Sooramaa - Oromia International Bank
Herregni qusannoo kun namni kamiyyuu bane yeroo dheeraadhaa qusachuun sooramaan yeroo hojii irraa geggeefamu ykn sababa umurii yeroo hojii dhaabu herrega qusannoo itti fayyadamudha. Qusannoo idilee irra dhala caalutu itti herregama.
Herregni yeroo sooramaa maamilli yeroo sooramaaf kan ta’u maallaqa kuufachuuf gargaara.
Herregni kun herrega qusannoo idilee irra dhala fooyya’aatu itti herregama.
Herrega kana banuuf hanga maallaqaa barbaachisu baankichatu murteessa.